Nanangona Chico il y a 2 années
Toetra Ràja il y a 2 années
Nangonin'i R.V il y a 2 années
Ny voninkazonao ry Neny !
Nanangona i JRR il y a 2 années
Na vady na zanaka dia mahavatra manolotra fehezam-boninkazo sy fanomezana ho an'ny reny ary mbetika aza mandravaka izany amin'ny teny mamy mirindra sy miendrika tononkalo. Andinin-teny vitsivitsy notsongain'i Toetra Ràja, poety miara-dalana amintsika tato ho ato, no atolotra etoana.
Ny 25 mey no andro maneran-tany ho an'ny zaza very, natao ho fanamafisana ny ady amin'ny fanolanan-jaza sy ny tambazotra mahakasika izany. Mitondra ny fahitany ity zava-doza eo anivon'ny fiaraha-monina ity i Toetra Raja.